MR MRT: အထူးတရားပွဲ (Dec 29, 2016)
အထူးတရားပွဲ (Dec 29, 2016)
(မန္တလေး ကန်တော်ကြီး) ဓမ္မဓရ ဝါဆိုကျောင်း၌ အောက်စဖို့ ဆရာတော် ဟောကြားသည်။ ဓမ္မဓရသံဃာတော်များ နှင့် မန်းနပသ သံဃာတော်များ နာယူကြသည်။ သံဃာငါးရာကျော်သည်။ သံဃာသီးသန့် တရားနာပရိသတ် ဖြစ်သောကြောင့် ထူးခြားသည်။ တရားနာပရိသတ်ထံမှ ဓမ္မပူဇာအလှူငွေ မျှော်လင့်ဖွယ် မရှိခြင်းကိုလည်း ထူးခြားချက်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဆရာတော်၏ ပညာရေးနှင့် သာသနာရေး အတွေ့အကြုံများ မျှဝေသည်။ ဆောင်ရွက်ဖွယ်များ ညွှန်ပြသည်။ အမေး-အဖြေ ပြုလုပ်ကြသည်။
ပညာရေး ပြောင်းလဲမှုကို ဆရာများဘက်က စတင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းသား၏ အဖြေက ဆရာ့အဖြေနှင့် တူနေမှ မှန်သည်ဟု မသတ်မှတ်သင့်ကြောင်း၊ ကျောင်းသားအပေါ် ချုပ်ကိုင်မှု လျှော့သင့်ကြောင်း။ ဆုကြေးရံပုံငွေ နည်းနေ၍ အောင်ချက်လျော့အောင် အောင်မှတ်မြှင့်လိုက်ခြင်းမျိုးမှာ စာသင်သားအပေါ် မတရား အနိုင်ယူခြင်းဖြစ်၍ မလုပ်သင့်ကြောင်း၊ စာသင်သားတို့ ဘွဲ့များနောက်လိုက်ခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်မခံသင့်ကြောင်း။ အောက်စဖို့ ပညာရေးမှာ အတ္တာ ဟိ အတ္တနော နာထော ဖြစ်ကြောင်း၊ စာသင်သားကိုယ်တိုင် အားစိုက်ရကြောင်း။ ဆရာတစ်ယောက်က တပည့် လေးငါးယောက်လောက်သာ တာဝန်ယူ ကွပ်ကဲပေးရသဖြင့် ထိရောက်ကြောင်း။ ကောင်းမွန်သည့် ပညာရေးစနစ်အတွက် ဆရာနှင့် စာအုပ်များ ပြည့်စုံရန် လိုအပ်ကြောင်း။ စာသင်သားတို့ အနှစ်ချုပ် ယူတတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ဓမ္မာစရိယ ပြီးသော်လည်း သာမညဖလသုတ်၏ ဆိုလိုရင်းကို မသိလိုက်ခြင်းမျိုး မဖြစ်သင့်ကြောင်း။ မေးခွန်း နှင့် အဖြေကို ဆရာက အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ပေးခြင်းမှာ တက္ကသိုလ်အဆင့် မဟုတ်ကြောင်း၊ ဆရာက မေးခွန်းပေး၍ တပည့်ကိုယ်တိုင် အဖြေရှာရခြင်းသည် BAအဆင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆရာက မေးခွန်းအစဖော်ပေးပြီး ကျောင်းသားက ဆက်လက်၍ မေးခွန်းထုတ် ပြဿနာရှာရခြင်း အဖြေထုတ်ရခြင်းသည် MAအဆင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းသားကိုယ်တိုင် မေးခွန်းထုတ် ပြဿနာရှာ၍ ၊ ကျောင်းသားကိုယ်တိုင်ပင် အဖြေရှာရခြင်းသည် PhDအဆင့်ဖြစ်ကြောင်း။ ပါဠိဘာသာစကား သင်ယူရာ၌ ဗာလာဝတာရကျမ်း ဆိုလျှင် လုံလောက်ကြောင်း၊ စာသင်သားအတွက် ကစ္စည်းကျမ်းသည်ပင် ကျယ်နေသေးကြောင်း၊ ရူပသိဒ္ဓိဆိုလျှင် ပါမောက္ခအဆင့် ဆရာများသာ လေ့လာကြကြောင်း။ ဘာသာပြန်တတ်ရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ အဘိဓာန်ကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချသင့်ကြောင်း။ ခရစ်ယန် သမ္မာကျမ်းစာကို ကမ္ဘာ့ဘာသာစကား လေးငါးထောင်ဖြင့် ပြန်ဆိုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာ ဖတ်ခွင့်မရသည့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေမှာ လေးရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိကြောင်း။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အနေဖြင့် ဓမ္မပဒကိုပင် မြန်မာတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများဖြင့် ဘာသာပြန်ထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း။ အင်္ဂလိပ်စာကို တိရစ္ဆာနကထာဟု သတ်မှတ်ခြင်းသည် မည်သည့်ကျမ်းဂန်ကို ကိုးကား၍ သတ်မှတ်သည်ဟု မသိကြောင်း။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ BAပြီးလျှင် အခြားတက္ကသိုလ် တစ်ခု၌ MAဆက်တက်ခွင့် ရှိသင့်ကြောင်း၊ တက္ကသိုလ် တစ်ခု၌ ဒုတိယနှစ်ပြီးလျှင် အခြားတက္ကသိုလ် တစ်ခု၌ တတိယနှစ် ဆက်တက်ခွင့် ပေးသင့်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်ချင်း သင်ရိုးများ အခြေခံအားဖြင့် တူနေသောကြောင့် ချိတ်ဆက်နေသင့်ကြောင်း။ သာသနာအတွက် ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပြိုင်ဆိုင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ပူးပေါင်းခြင်း ဖြစ်သင့်ကြောင်း စသည် . . .။
Posted by Ashin Acara. at 4:29 AM
Labels: 04. Others - အခြား, 04. Reader - ဖတ်စာ, 08. News Words - သတင်းစကား